यी ब्लड ग्रुप भएकामा हुन्छ हार्ट अट्याकको खतरा धेरै, तपाईंको कुन ? - Sawal Nepal
यी ब्लड ग्रुप भएकामा हुन्छ हार्ट अट्याकको खतरा धेरै, तपाईंको कुन ?
काठमाडाैं सवाल नेपाल २०७७ कार्तिक १६, ०९:१४
बदलिँदो जीवनशैली तथा खानपानका कारण मानिसमा मुटु सम्बन्धी रोगको खतरा बढ्दै गएको छ । पछिल्लो समय विश्वमा मुटुसम्बन्धी विभिन्न समस्याहरु बढीरहेको अध्ययनहरुले देखाएको छ ।
मुटुसम्बन्धी रोग लाग्नुको प्रमुख कारण अस्वस्थ्य खानपान, व्यायामको कमी, तनाव लगायतलाई मानिएको छ ।
तर एक अनुसन्धानका अनुसार हार्ट अट्याकको एक कारण हाम्रो शरीरमा रहेको रगतको समूह –ब्लड ग्रुप) पनि हुन्छ । ब्लड ग्रुपबाट हार्टअट्याकको खतरा पत्ता लाग्न सक्छ । साथै यो सम्भावनाको पनि पत्ता लाग्छ कि कुन ब्लड ग्रुपका मानिसमा हार्ट अट्याकको धेरै खतरा छ ?